Xiaomi Black Shark2ကို ၂၃ ရက်နေ့မှာ ကြေညာတော့မလား ? – Myanmar Mobile App
ရှောင်မီရဲ့ Black Shark2အမည်ရ Gaming Smartphone ကို ယခုလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ကြေညာတော့မယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်လာတဲ့ ပိုစတာမှာ နေ့ရက်ကို ပြသထားပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကြေညာနိုင်ပါတယ်။
TENAA မှ သူ့ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကို ပြီးခဲ့တဲ့ လက သိခဲ့ရပါတယ်။ လက်ရှိကြားနေရတဲ့ သတင်းတွေအရတော့ screen size မှာ ပထမမျိုးဆက်မှာ သုံးခဲ့တဲ့ 5.99 လက်မနဲ့ တူနိုင်ပြီး၊ ဘက်ထရီပိုင်းမှာလည်း 4,000 mAh စွမ်းအားကိုသာ ပြန်သုံးလာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ပိုရှည်ပြီး၊ ပိုပါးလာနိုင်ပါတယ်။
Xiaomi Black Shark2ကို ၂၃ ရကျနမှေ့ာ ကွညောတော့မလား ?
ရှောငျမီရဲ့ Black Shark2အမညျရ Gaming Smartphone ကို ယခုလ ၂၃ ရကျနမှေ့ာ ကွညောတော့မယျလို့ ထငျရပါတယျ။ ပေါကျကွားထှကျပျေါလာတဲ့ ပိုစတာမှာ နရေ့ကျကို ပွသထားပါတယျ။ တရုတျနိုငျငံမှာ ကွညောနိုငျပါတယျ။
TENAA မှ သူ့ရဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားကို ပွီးခဲ့တဲ့ လက သိခဲ့ရပါတယျ။ လကျရှိကွားနရေတဲ့ သတငျးတှအေရတော့ screen size မှာ ပထမမြိုးဆကျမှာ သုံးခဲ့တဲ့ 5.99 လကျမနဲ့ တူနိုငျပွီး၊ ဘကျထရီပိုငျးမှာလညျး 4,000 mAh စှမျးအားကိုသာ ပွနျသုံးလာမယျလို့ သိရပါတယျ။ သို့ပမေယျ့ ပိုရှညျပွီး၊ ပိုပါးလာနိုငျပါတယျ။
Vivo က X23 ကို တရားဝင် ကြေညာခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်များစွာ ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ အခုတော့ သူ့ကို Vivo ရဲ့ တရားဝင် ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ ပြသထားပါတယ်။ ခရမ်း၊ အပြာနဲ့ အနီရောင်များကို ဓါတ်ပုံများမှာ မြင်ရပါတယ်။ ဈေးနှုန်းနဲ့ သူ့ရဲ့ Specifications များကိုတော့ ပြသထားခြင်း မရှိပါဘူး။ Vivo က သူ့မှာ စတုတ္ထမျိုးဆက် မျက်နှာပြင်အောက် လက်ဗွေရာ ကိရိယာပါလာပြီး Vivo NEX S ထက် ပိုမို လျှင်မြန်လာပြီး တိကျလာမှာပါလို့ ပြောပါတယ်။ အနောက်ဘက်မှာ 12MP+5MP ထည့်သွင်းထားမှာဖြစ်ပြီး AI Dual Camera များ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ Qualcomm Snapdragon […]